” စဉ်းစားသော်လည်း အဖြေမရခြင်းသည်ကား….” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” စဉ်းစားသော်လည်း အဖြေမရခြင်းသည်ကား….”
” စဉ်းစားသော်လည်း အဖြေမရခြင်းသည်ကား….”
Posted by ခင်ခ on Sep 4, 2014 in Creative Writing, Health & Fitness, My Dear Diary | 22 comments
ဘာသာပြန်သတင်းဆောင်းပါးလေးတစ်ခု ဖတ်မိလိုက်တယ်၊ အဲဒီသတင်းဆောင်းပါးမှာ ရေးထားတာက ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဆေးစီရင်ထားရှိရေး ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော Alcor က သေဆုံးသူခန္ဓာကိုယ်ကို မပုပ်မသိုးအောင် စီရင်ထားရှိပေးနေပြီး လူတစ်ဦးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်သိန်းကျသင့်မည်ဖြစ်ကာ နောင်တစ်ချိန်ဆေးပညာ တိုးတက်လာသည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်နိုးထလာနိုင်မည့်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် စာရင်းပေးသွင်းသူများရှိနေပြီဖြစ် ကြောင်းသိရပါတယ်၊ အတိတ်ကာလက လူတစ်ဦးသေဆုံးလျှင် သေဆုံးသည်ဟု အလွယ်တကူလက်ခံကြ သော်လည်း ယခုမျက်မှောက်ခေတ်ကြီးတွင် လွယ်လွယ်နှင့်လက်မလျော့ကြပေ၊ CPR ပေးခြင်း၊ ဆေးရုံသို့ အမြန်တင်ပို့ကာ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြသည့်အပြင် ယခုဆေးပညာနှင့် လက်လှမ်းမမီ သောကြောင့် သေဆုံးသူများကို Alcor က ဆေးစီရင်ပေးမည်ဖြစ်ကာ ရောဂါပိုဆိုးရွားမသွားတော့ဘဲ ရပ်တန့် နေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နောင်တစ်ချိန်ဆေးပညာတိုးတက်လာကာ ၎င်းရောဂါကို ကုသနိုင်မည်ဆိုပါက ဆေးစီရင် ထားခြင်းကို ပယ်ဖျက်ကာဆေးဝါးဆက်လက်ကုသခံကာ အသက်ရှင်သန်နိုင်မည့် စီမံချက်ကြီးကို Alcor ကုမ္မဏီ က ရေးဆွဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးသူတစ်ဦးကို ဆေးစီရင်ထားရှိကာ နောင်တစ်ချိန်တွင် ဆေးဆက်လက်ကုသအသက်ပြန်ရှင်သန်စေမည့် ကိစ္စကို မည်သူမှလက်တွေ့မစမ်းသပ်ဖူးသေးချေ၊ သို့သော်လည်း ဆေးစီရင်ခံရန်အားတက်သရော စာရင်း ပေးသွင်းသူများရှိနေပြီး ဦးနှောက်ကို ဆေးစီရင်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရှစ်သောင်း၊ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဆေးစီ ရင်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်သိန်းဖြစ်ပြီး ယခုစာရင်းပေးထားသူမှာ ဦးရေ ၁၀၀၀ ခန့်ပင် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
စာရင်းပေးသွင်းထားသူများကို Alcor ၀န်ထမ်းများက အစဉ်စောင့်ကြည့်နေကြပြီး ၎င်းတို့သေဆုံးမည့် အချိန် နီးလျှင် လူနာအနီးတွင် အသင့်စောင့်ဆိုင်းကြမည်ဖြစ်သည်၊ လူနာသေဆုံးကြောင်း ဆရာဝန်က တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သောအခါ ဆေးစီရင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စတင်မည်ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူကို ရေခဲလွှာပေါ်တွင် လဲထားလိုက်မည်ဖြစ်ကာ ရေခဲအချပ်များဖြင့် အုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်၊ နှလုံး၊ အဆုတ်တို့ကို စက်ဖြင့်ပြန်နှိုးပေး ကာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ သွေးပြန်လည် လည်ပတ်စီးဆင်းစေပြီး ဆဲလ်များပျက်စီးမသွားအောင် ဆေးအနည်းဆုံး ၁၆ မျိုးပေးသွင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ (Cd – TMK )
အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓတရားတော်မှာတော ရုပ် နဲ့ နာမ် ပေါင်းစည်းပြီး ဘ၀ဖြစ်တည်လာကာ စုတေစိတ်ကျပြီး သေဆုံးသည့်အခါ နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်မပြုသရွေ့ လက်ရှိဘ၀ ရုပ်ကို စွန့်ခွါပြီး နာမ် ဖြစ်သည် စိတ်ဝိညဉ်က အခြား ရုပ် တစ်ခုတွင် ကပ်မှီပြီး နောက်ဘ၀သစ်တစ်ခု ဖြစ်တည်တယ်လို့ဆိုတယ်၊ အဲဒီလို တစ်ဘ၀နဲ့တစ်ဘ၀ နာမ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဝိညဉ် ကူးခြင်း ဟာအကြားမလပ်ဘူးဟုဟောခဲ့လေတော့ကာ အခုဆောင်းပါးအရဆိုရင် ဆေးပညာအလွန်တိုးတက်လို့ ပြန်လည် အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် မူလ ထိုရုပ်ခန္ဓာရဲ့ နာမ်ဆိုသော(အသက်)က ပြန်လည်ပြီး ၀င်စားကာနိုးထတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုများ ပြောရပါ့မလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်နေမိပေမယ့် ကျေနပ်လောက်တဲ့အဖြေမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။
မိတ်ဆွေတို့ကော ဘယ်လိုများယူဆပါသလဲ စဉ်းစားကာတွေးကြည့်ပါလားဟင် !!!!!!!!!!!!!!!!
နောင်ဘဝတွေမှာ လူချမ်းသာ နတ်ချမ်းသာ ဖြစ်ချင်ရသေးတာနဲ့…
ဒီဘဝ ဒီရုပ်ကြီးကို… လွယ်လွယ်နဲ့ မစွှန့်လွှတ်နိုင်ရတာနဲ…
ကျုပ်လဲ အဲဒါဘဲတွေးနေတာလေ Lucifer ရေ။
ပြန်နိုးလို့မရ ရင် 2သိန်းဆုံးပေါ့ ဟ
၁ )အဲဒီနောက်ဘ၀နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့တရားဟောဟာ.. ဘုရားဟောမဟုတ်ဖူးလို့….ယူမလား..
၂) ဘုရားဟောတာမှားနေတယ်…လို့ယူမလား.. တခုခုယူရလ်ိမ့်မယ်..။
ဗုဒ္ဓဟာ.. ရှေ့ဘ၀/နောက်ဘ၀အယူကို မယူဘူးလို့ဆိုထား(ဟောထား)တာကို.. ယုံကြည်လက်ခံသမို့…
သေခါနီးဇောကျတာတို့.. ၀ိညဉ်သဖွယ်လောက်လန်းတွယ်တို့က.. အဘိဓမ္မာထဲပါပြီး.. အဘိဓမ္မာဆိုတာ… ဘုရားပုရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး.. နောက်.. နှစ် ၃၀၀လောက်မှ.. သံဃာယနာတင်တာကတဆင့်.. ပိဋကတ်ထဲထိုးသွင်းထည့်တာ..အောင်မြင်ပါဝင်လာတယ်လို့.. သမိုင်းအထောက်အထားတွေရှိသမို့.. ဘုရားဟောမဟုတ်တာ.. ပိုလို့သေချာနေသေး…။
၁၇၉။ အသျှင်ဘုရား အခါတစ်ပါး၌ အကျွန်ုပ်သည် သဉ္စယဗေလဋ္ဌပုတ္တထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ သဉ္စယဗေလဋ္ဌပုတ္တနှင့်အတူ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ (နှုတ်ဆက်) ပြောဆိုပါ၏၊ ဝမ်းမြောက်ဖွယ် အမှတ်ရဖွယ်စကား ကို ပြီးဆုံးစေ၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်လျက် သဉ္စယဗေလဋ္ဌပုတ္တ္တအား ဤပြဿနာကိုမေးဖူးပါ၏ –
”အသျှင်သဉ္စယ များစွာသော အတတ်သည်တို့သည် ရှိပါကုန်၏။ပ။ ဤ (အတတ်တို့၏ အကျိုး) နှင့်တူစွာ မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ကိုယ်တိုင် သိမြင်ရသော ရဟန်း ဖြစ်ကျိုးကို ပြခြင်းငှါ တတ်နိုင်ပါသလောအသျှင်သဉ္စယ”ဟု မေးဖူးပါ၏။
၁၈ဝ။ ဤသို့ မေးသော် သဉ္စယဗေလဋ္ဌပုတ္တ္တသည် အကျွန်ုပ်အား ဤစကားကို ပြောဆိုပါသည်အသျှင်ဘုရား –
”တစ်ပါးသော လောက ရှိသလောဟု (သင်) ငါ့ကို မေးသော် တစ်ပါးသော လောကရှိ၏ဟု ငါအယူရှိခဲ့လျှင် တစ်ပါးသော လောကရှိ၏ဟု သင့်အား ငါဖြေရာ၏၊ (သို့ရာတွင်) ဤသို့ဟုလည်း ငါ မယူ၊ ထိုသို့ဟုလည်း ငါမယူ၊ အခြားသို့ဟုလည်း ငါမယူ၊ (ဤသို့ ထိုသို့ အခြားသို့) မဟုတ်ဟုလည်း ငါမယူ၊ (ဤသို့ ထိုသို့ အခြားသို့) မဟုတ်သည် မဟုတ်ဟုလည်း ငါမယူ။
တစ်ပါးသော လောက မရှိပါသလော။
တစ်ပါးသော လောက ရှိလည်းရှိ မရှိလည်း မရှိသလော။
တစ်ပါးသော လောက ရှိသည်လည်း မဟုတ်၊ မရှိသည်လည်း မဟုတ်သလော။
(သေ၍) တစ်ဖန် ဖြစ်ပေါ်သော သတ္တဝါတို့ ရှိကုန်သလော။
(သေ၍) တစ်ဖန် ဖြစ်ပေါ်သော သတ္တဝါတို့ မရှိကုန်သလော။
(သေ၍) တစ်ဖန် ဖြစ်ပေါ်သော သတ္တဝါတို့ ရှိလည်းရှိ မရှိလည်း မရှိကုန်သလော။
(သေ၍) တစ်ဖန် ဖြစ်ပေါ်သော သတ္တဝါတို့ ရှိသည်လည်း မဟုတ်၊ မရှိသည်လည်း မဟုတ်ကုန်သလော။
ကောင်းမှု မကောင်းမှုကံတို့၏ အကျိုးဝိပါက် ရှိပါသလော။
ကောင်းမှု မကောင်းမှုကံတို့၏ အကျိုးဝိပါက် မရှိပါသလော။
ကောင်းမှု မကောင်းမှုကံတို့၏ အကျိုးဝိပါက် ရှိလည်းရှိ မရှိလည်း မရှိသလော။
ကောင်းမှု မကောင်းမှုကံတို့၏ အကျိုးဝိပါက် ရှိသည်လည်း မဟုတ်၊ မရှိသည်လည်း မဟုတ်သလော။
သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ရှိသလော။။
သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ မရှိသလော။။
သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ရှိလည်းရှိ မရှိလည်း မရှိသလော။။
သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ရှိသည်လည်း မဟုတ်၊ မရှိသည်လည်း မဟုတ်သလောဟု (သင်) ငါ့ကိုမေးသော် သတ္တဝါသည် သေပြီးသည့်နောက်၌ ရှိသည်လည်း မဟုတ် မရှိသည်လည်း မဟုတ်ဟုငါ အယူရှိခဲ့လျှင် သတ္တဝါသည် သေပြီးသည့်နောက်၌ ရှိသည်လည်း မဟုတ် မရှိသည်လည်း မဟုတ်ဟုသင့်အား ငါ ဖြေရာ၏၊ (သို့ရာတွင်) ဤသို့ဟုလည်း ငါ မယူ၊ ထိုသို့ဟုလည်း ငါ မယူ၊ အခြားသို့ဟုလည်း ငါ မယူ၊ (ဤသို့ ထိုသို့ အခြားသို့) မဟုတ်ဟုလည်း ငါ မယူ၊ (ဤသို့ ထိုသို့ အခြားသို့) မဟုတ်သည် မဟုတ်ဟု လည်း ငါမယူ”ဟု ပြောဆိုပါသည်။
သဂျီး ပြောမှ ပိုလို့တောင် အတွေးတွေဖြစ်ရပြီကွယ်
အင်မတန်ရှေ့နောက်ညီတဲ့.. ဗုဒ္ဓဟာ.. ဘာကြောင့်ဘယ်လို. .ဘာလို့.. မယူဆိုတာလည်း.. ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်..
အဲဒီနေရာမှာ.. “မယူ”ဆိုတာကို.. “မရှိ”ဆိုတာနဲ့.. အင်မတန်မှားတတ်ကြတာ.. သတိပြုကြစေလို..။
၁၂၈။ မာလုကျပုတ္တ ထို့ကြောင့် ဤသာသနာတော်၌ သင်သည် ငါ မဟောကြားသည်ကိုလည်းမဟောကြားသည့်အတိုင်း မှတ်သားလော့၊ ငါ ဟောကြားသည်ကိုလည်း ဟောကြားသည့်အတိုင်းမှတ်သား လော့၊ မာလုကျပုတ္တ ငါမဟောကြားသည်မှာ အဘယ်နည်း- မာလုကျပုတ္တ လောကသည်မြဲ၏ဟု ငါမဟောကြား၊ လောကသည် မမြဲဟု ငါမဟောကြား၊ လောကသည် အဆုံးရှိ၏ဟုငါမဟောကြား၊ လောကသည် အဆုံးမရှိဟု ငါမဟောကြား၊ ထိုအသက်သည်ပင် ထိုကိုယ်တည်းဟုငါမဟောကြား၊ အသက် သည်တခြား ကိုယ်သည်တခြားဟု ငါ မဟောကြား၊ သတ္တဝါသည်သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်၏ဟု ငါ မဟောကြား၊ သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ မဖြစ်ဟုငါမဟောကြား၊ သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောက်၌ ဖြစ်လည်း ဖြစ်၏၊ ဖြစ်လည်း မဖြစ်ဟုငါမဟောကြား၊ သတ္တဝါသည် သေသည်မှနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်ဟုငါမဟောကြား။ မာလုကျပုတ္တ ထိုအကြောင်းကို အဘယ်ကြောင့် ငါမဟောကြားသနည်း၊ မာလုကျပုတ္တထိုအကြောင်းသည် အကျိုးစီးပွါးနှင့် မစပ်၊ မြတ်သောသာသနာတော်၏ အစအနမျှလည်း မဖြစ်၊ ဝဋ်ဆင်းရဲကို ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ရာဂကင်းခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ရာဂချုပ်ခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ကိလေသာမီးငြိမ်းအေးခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ သစ္စာလေးပါးကို သိခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှါ မဖြစ်နိုင်၊ ထို့ကြောင့် ထိုအကြောင်း အရာကို ငါဘုရားမဟောကြား။
မာလုကျပုတ္တ အဘယ်ကို ငါဘုရားဟောကြားသနည်း- မာလုကျပုတ္တ ဤကား ဆင်းရဲတည်းဟုငါဘုရား ဟောကြား၏၊ ဤကား ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတည်းဟု ငါဘုရားဟောကြား၏။ ဤကား ဆင်းရဲချုပ်ရာတည်းဟု ငါဘုရားဟောကြား၏။ ဤကား ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်တည်းဟုငါဘုရားဟောကြား၏။ မာလုကျပုတ္တ ထိုတရားကို အဘယ်ကြောင့် ငါဟောကြားသနည်း- မာလုကျပုတ္တထိုတရားသည် အကျိုးစီးပွားနှင့် စပ်၏၊ ထိုတရားသည် မြတ်သောအကျင့်ဖြစ်သော သာသနာတော်၏အစအနဖြစ်၏၊ ဝဋ်ဆင်းရဲ၌ ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ ရာဂကင်းခြင်းငှါ ရာဂချုပ်ခြင်းငှါ ကိလေသာမီးအေးငြိမ်းခြင်းငှါ ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် သိခြင်းငှါ သစ္စာလေးပါးကို သိခြင်းငှါ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှါ ဖြစ်၏၊ ထို့ကြောင့် ထိုတရားကို ငါဟောကြား၏။ မာလုကျပုတ္တ ထို့ကြောင့်သာလျှင် သင်တို့သည်ဤငါမဟောကြားသည်ကို မဟောကြား သည့်အတိုင်း မှတ်ကြကုန်လော့၊ ငါဟောကြားသည်ကိုလည်းဟောကြားသည့်အတိုင်း မှတ်သားကြကုန် လော့
ခေတ်သစ် ဖရန်ကင်စတိန်း လာပြီလားးး
ငါ့နှမ ပျောက်ချက်သားကောင်းနေရာက မန့်ချက်ပြန်တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာတယ်ဗျ။
ဟိုမှာဖက်.. မန့်ခဲ့တာလေး.. အတွေးကမ္ဘာချာချာလည်နိုင်ကြအောင်.. ပြန်တင်ပါတယ်..။
နောင် ၁၀စု ၁ခု၂ခုအတွင်းရလောက်တယ်…
နောက်ကျလှ.. နောက် အနှစ်၂၀ပဲ…။
ယူအက်စ်မစ်လစ်ထရီထဲတော့.. အောင်မြင်နေပြီလားတောင်.. မသိ..။
အောက်ကရုပ်ရှင်ကလေး ၂ခုမှာ.. သဘောတရားပေါ်လွင်နေတယ်ထင်..
အဲဒီထဲမှာမှ Transcendence ရုပ်ရှင်ထဲက.. သိပ္ပံအိုင်ဒီယာကို.. အိန္ဒိယကုလားတယောက်ယောက်က.. ဟိန္ဒူအမြင်၊ ထေရာတို့ဝါဒအမြင်နဲ့.. စံထားထီထွင်ရင်.. တခုခုတော့.. ဖြစ်လာလောက်တယ်.. ထင်…။
Lucy (2014) – IMDb
Rating: 6.6/10 – ‎52,558 votes
Directed by Luc Besson. With Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi, Amr Waked. A woman, accidentally caught inadark deal, turns the tables on .
Rating: 6.4/10 – ‎79,547 votes
Videos. Transcendence — A terminally ill scientist (Johnny Depp) downloads his mind intoa· Transcendence — Clip: Can You Prove You’re Self Aware?
သူကြီးပြောတဲ့ ရုပ်ရှင် (၂)ကားလုံးကို သဘောကျသဗျ…
Ai ဆိုတာကို Develpoment လုပ်နိုင်ရင်… ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာမှာပဲ…
အခုတင်.. ဂိုဂယ်က.. စလုပ်နေကြောင်းသတင်းတင်ပြီလေ..
အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံသားတွေကို.. အိုင်ဒတတီပျောက်.. ဘ၀ပျက်အောင်လုပ်ဖို့ကလည်း.. ဒီနည်းကသာအလွယ်ဆုံး/အထိရောက်ဆုံးလို့.. ထင်..။
The Verge-1 hour ago
Google has hiredateam of quantum computing experts from University of California Santa Barbara as part ofadrive to design and build new quantum processors based on superconducting electronics. Noted physicist John Martinis and his team will join Google’s Quantum Artificial Intelligence Lab (QuAIL), alongside representatives from NASA and the Universities Space Research Association.
“Tests showed quantum computers may be no faster than regular computers”
Quantum computing was fêted as the next step in computing technology, with quantum processors able to work out calculations in short periods of time that would take regular computers millions of years. But the technology tookahit earlier this year when tests on the world’s first commercially available quantum computer — the D-Wave 2, priced at around $15 million — appeared to show that it was no faster thanastandard computer. Tempering that discovery isahealthy debate about whether the D-Wave2is actuallyaquantum computer or not.
PC Magazine-11 hours ago
Quantum computing could potentially lead to an exponential increase in computing power for humankind. The trouble is, the quantum bits, …
Alcor က သေဆုံးသူခန္ဓာကိုယ်ကို မပုပ်မသိုးအောင် စီရင်ထားရှိပေးနေပြီး လူတစ်ဦးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်သိန်းကျသင့်မည်ဖြစ်ကာ နောင်တစ်ချိန်ဆေးပညာ တိုးတက်လာသည့်အချိန်တွင် ပြန်လည်နိုးထလာနိုင်မည့်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် စာရင်းပေးသွင်းသူများရှိနေပြီဖြစ် ကြောင်းသိရပါတယ်၊
အင်း ဒီလိုဆိုရင် မသေခင်ထဲက ဒေါ်လာ နှစ်သိန်း စုဆောင်းထားရမှာလို ဖြစ်နေပြီ။
.. ရှေးတုန်းက မမ်မီ ရုပ်အလောင်းတွေလိုများဖြစ်နေမလား .. ဆေးပညာ၊သိပ္ပံအယူအဆကို ဘာသာရေးအယူအဆတွေနဲ့ ရော စဉ်းစားရတော့ အဖြေတော့ မထွက်လာဘူး.. သူကြီးညွှန်းထားတဲ့ ရုပ်ရှင် Lucy ကိုကြည့်ချင်လာတာပဲရှိတယ်.. Transcendence ကိုတော့ ကြည့်ပြီးပြီ.. ကြည့်ပြီး စဉ်းစားမိတာက တရားသဘောနဲ့ နီးစပ်သလိုရှိတယ်..
အဲဒီ လူစီမှာ အင်္ဂလိပ် စကားမပြောတတ်တဲ့ တရုတ်ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်တယ် ဆိုလားးး
နာလည်း ပစ်မို့ ဝယ်ထားပြီးပြီ။
ပုထုဇဉ်တွေအားလုံးဟာ အရူးတွေတဲ့ ..
လူကသာမန်ဆို.. ဦးနှောက်ရဲ့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းပဲအလုပ်လုပ်သတဲ့..။
Lucy က.. ဓာတုဆေးဝါးတမျိုးကြောင့်.. သူ့ဦးနှောက်က.. ၂၀..၃၀..စသဖြင့်တက်လာလိုက်တာ.. ၁၀၀ရခိုင်နှုန်းအထိရောက်သွားတဲ့ဇတ်လမ်းပါ..။
ရာခိုင်နှုန်းတက်လာတာနဲ့အမျှ.. လူကိုကြည့်ရင်..သစ်ပင်ကိုကြည့်ရင်.. ဖြစ်ပျက်စီးဆင်းနေတာတွေ.. အနုလုံပဋိလုံ သူကအကုန်မြင်ရသပေါ့..။
ဗုဒ္ဓက.. ၁၀၀ ဆိုပါစို့…
The 10% of brain myth is the widely perpetuated urban legend that most or all humans only make use of 10% (or some other small percentage) of their brains. It has been misattributed to many people, including Albert Einstein. By association, it is suggested thataperson may harness this unused potential and increase intelligence.
သူကြီး The Giver စာအုပ်ဖတ်ပြီးပလား သူက ပိုနီးစပ်တယ်
သဂျီးတော့ လျှာကို အရိုးတပ်ပြီး လျှောက်မွှေနေပြီ